I izakhiwo nangokuvikela zomhlaba Sekuyisikhathi eside asetshenziswa kwezolimo izidingo ezahlukene. Njengoba isibonelo, ensiling ithekhniki le kuvumela ukuthi emiseleni ayecashe kuyo futhi izimbobo ukudala izimo ukuze kulondolozwe isitshalo izinsiza ukudla. nezinye izinselele eziningana iwuhlasele lalihlehliswa imigodi balimi. Bona esikhundleni bendabuko abamba ukushisa izakhiwo ukunikela ukuhlela izimo yokufakelwa ezikhulayo okulungile niche udoti. Ngamanye amazwi, kwakhiwa abamba ukushisa komhlaba, okuyinto has a igobolondo phezulu ayisivikelo izinto efanayo design ezivamile.
Ubude ukwakhiwa ubuchwepheshe
Isidingo Izindawo of zokugcina komhlaba kungenxa isifiso abalimi ukunikeza kwezimo ezifanele ukuthuthukiswa isitshalo. Lobu buchwepheshe ilula futhi ezingabizi - e epulazini elikhulu ayinakuba isidingo kwempahla izinto, kusukela Uhlaka kungenziwa esakhiwe kusukela amabhodi ezivamile, futhi wabasebenzisa njengezinceku ifilimu enamathela. Ngesikhathi okukhiphayo Kufanele uthole thermos-abamba ukushisa, ukwakhiwa okuyinto elibanzi eliqonde ukuqinisekisa ukuthi microclimate elikhulu. Ngenxa yalesi sizathu, kulezi zakhiwo babizwa wasebenzisa ezindaweni ezibandayo, lapho yonke into abamba ukushisa zakudala kudinga ukusetshenziswa sithuthukiswe ezishisayo ukwahlukanisa izinto. Kulokhu, basuke indawo udonga emhlabeni.
Naphezu ngokujulile isisekelo, engxenyeni engenhla isazoqhubeka eyenziwa imithetho jikelele ukufakwa zokugcina. Ngaphambi umnikazi futhi kuyoba umbuzo kokukhetha elilungile okufana ikhava. Iyini i-greenhouse kangcono - polycarbonate, ifilimu noma ingilazi? Indlela yokuqala sibonisa kangcono ngokwayo ngesimo takhiwo tenchubo egcwele, ifilimu, njengoba sekuphawuliwe kakade, ukhetho ezingabizi kakhulu, futhi ingilazi kungenzeka inguqulo Lesisemkhatsini efanelekayo izinto nezimfuneko ephezulu ukushisa ukwahlukanisa.
Ulungiselela isisekelo abamba ukushisa
Kuye ngobukhulu we lohleliwe abamba ukushisa ezolimo kunqunywa ubukhulu ushona. Amapharamitha esivamile izakhiwo ezinjalo ziyathandeka 1.5 x 2.5 m. Ukujula lingafika ku 1 m. Kubalulekile ukuba acabangele indawo ingxenye into ensimini. Abamba Ukushisa kufanele zitholakale ohlangothini lwaseningizimu, futhi inhlabathi igodi kufanele kwesokunxele engxenyeni esenyakatho lesi sakhiwo. Ezingosini akhiwa izimbobo ukwesekwa izingalo esizayo. Kuye siyoba yini Usayizi komhlaba zokugcina unyaka wonke, kunqunywa indlela yokuhlela isisekelo sokuthethelelwa Uhlaka futhi, ngokufanelekile, kwemigomo imigodi. Ngemva ilungiselelo niches ngaphansi izingongolo kumele kancane olwembiza itshe noma amatshe ukugcwalisa, bese wengeza amanzi. Izakhi yenethiwekhi asethwe ngokuvumelana uhlobo isisekelo ezivamile, isb nge grout. Lapho ingxube kwaba polymerization ephelele kungenzeka ukuqala ukwakhiwa isidumbu.
Ukufakwa uzimele base
Ekhosombeni ipherimitha ukuze aqinise isakhiwo kungabuye egcwele isisekelo noma ukuvinjwa ujenga. Kuzo zombili lezi zimo, lezi zinto isinyathelo njengesisekelo ukwakhiwa obengeziwe izindonga nophahla. Kuye ngobukhulu kanye izimfuneko microclimate, abamba ukushisa komhlaba angase kwenziwe ngezinto ezahlukene. Inketho ezingabizi kakhulu - ukusebenzisa amabhodi, okuyinto eyenziwa ukulungisa metal Trusses usebenzisa ngezikulufo. Okungukuthi, kwakheka Uhlaka ngumuntu skeleton double, okuyinto esikhathini esizayo uyomenzela izinto Plating.
Samuntu yesibili inikeza indlela lubucayi kakhudlwana ilungiselelo isakhiwo - laying thermoblocks. Ngokuya ezishisayo ukwahlukanisa umsebenzi isixazululo esingcono. Kahle ahlelwe odongeni kwale nto angayisusa ngisho isidingo ukwahlukanisa eyengeziwe. Nge block emise abamba ukushisa thermos isakhiwo esingagcina uqobo uba indices Regulator microclimate evumayo ezimileni.
Endabeni ifilimu impahla kwanele ukulungiselela kumasegmenti ukuthi uyenzele ukufukamela isakhiwo isisekelo. isikhala ngokuhlanganyela ngokuvamile fixed iluphu, noma, okungcono nakakhulu, ekuqaleni ithungwe ukwakhiwa utjuzhkom. Uma kuhlelwe komhlaba abamba ukushisa ingilazi, kufanele uthenge amaphrofayli ekhethekile, okuyinto kuzolungiswa ngumuntu ezihlukanisile amashidi. Ngokuya ukusebenza ukwahlukanisa le ndlela ngokuhlanganyela thermoblocks Sihlomise unike amandla ukwakhiwa elihle kunawo ku nemingcele sezulu.
Polycarbonate mayelana ezivamile ukulima iphrojekthi kubhekwa isixazululo esingcono kakhulu. Kwenzeka okufanayo nasesikhathini izici kuya ingilazi, kodwa ngokuya kungasinika amandla zincintisane iphrofayli aluminium. Noma kunjalo, umbuzo ngokuqondene nokuthi imiphi kungcono abamba ukushisa - ingilazi noma polycarbonate, akuyona kuwumklamo ojwayelekile. Okokuqala, carbonate kuyinto ingilazi ezibizayo. Okwesibili, in the komhlaba zokugcina amandla ayo izakhiwo azibalulekile ngakho, + ngakho-ke elinye Kungenzeka kufike namabhodlela.
Ukuthuthukiswa ngci izinto engeziwe ngokuvamile elisetshenziswa amacala usebenzisa inhlanganisela izindonga ipulangwe futhi ifilimu enamathela. zifudumele lalihlehliswa abamba ukushisa usebenzisa Foam futhi ifilimu heater. hhayi Kunconywa ukusebenzisa izinto zokwenziwa.
Futhi, ngaphezu kwalokho okudingeke ukuba zakha ukukhanyisa uhlelo. ke akudingekile ukusebenzisa izibani ezivamile. abakhiqizi Abamba ukukhiqiza ekhethekile LED ama, okwakwenza kube lula ukuthola inani elihle kunawo lebanga umbala izitshalo. Ezindaweni ezibandayo, kuyoba engadingekile ukuhlinzeka uhlelo bafudumale underfloor. Ngosizo lwawo ahlelwe zokugcina evuthayo, ofanele futhi izitshalo ukushisa-onothando.
Izinzuzo izakhiwo komhlaba
Isimiso jikelele ukusebenzisa konke zokugcina ngokuyisisekelo isisetshenziswa khulula ngesimo umhlaba. Izindonga izingqimba phansi uba Regulator engokwemvelo sezulu kanye njengesithiyo zokuzivikela emathonyeni angaphandle. Ngakho-ke, ebusika ungenalo sikhathazeke ukuvikelwa okungeziwe zezakhiwo ngokumelene emoyeni, emvuleni kanye frost. Ikakhulukazi ezibalulekile maqondana nalokhu abamba ukushisa evuthayo, obuhlanganisa izinzuzo ukujula design kanye ilungiselelo ongumsizi Ukushisa umsebenzi, esenza kwenzeke into wezolimo round msebenzi. Yiqiniso, uhlu yandisa kanye nezitshalo efanelekayo yokutshala kule imibandela esungulwe.
Nokho ukwakhiwa kwezakhiwo esinjalo aqede ngokuphelele umnikazi kusukela kokuhlupheka ekuthuthukiseni okungenani jikelele kwendikimba isixazululo design. Kufanele ibalwe kusengaphambili futhi isethi esiqondile izinto okuyinto izokwakhiwa abamba ukushisa komhlaba engxenyeni engenhla. Iqiniso lokuthi ukucushwa kwe-Uhlaka main ziyonquma base isisekelo, ngakho izinguquko kule nqubo ngeke zisebenze ukwenza. Yisigaba esibaluleke kakhulu - ukudalwa zokukhosela. Kungaba akhiphe bese usebenzisa ifilimu futhi usebenzisa ingilazi. Futhi, eziningi zobuchwepheshe ukusetshenziswa polycarbonate okuhlala isikhathi eside futhi high ukukhanya ukudluliswa amakhono.
Tattoo "Ingelosi" - njengentelezi nenhle Ezulwini
"UAZ Patriot Udizili": udaka amathangi asesabi!